Shirka Gudiga Sare ee Qaban-qaabada xuska maalinta Qoomiyadaha iyo Shucuubta itoobiya oo ka dhacay Hoolka Shirarka ee Xafiiska Arimaha Haweenka. - Cakaara News
Waxaa shalay ka soo dagay garoonka diyaaradaha ee garaad wiil-waal airport wafti heer sare ah oo uu hogaaminayay afhayeenka golaha fedareeshinka dalka itoobiya mudane kase tegle burhan waftigaasi oo ah gudiyada qaban-qaabada xuska 8aad ee maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta itoobiya ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka masuuliyiinta xukuumada ugu saraysa oo ay uu hormuud u ahaa madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar.
Waftiga ayaa markii ay soo galeen xarunta deegaanka waxay shirka la galeen gudiya qaban qaabada xuska ee heer deegaan waxaana shirkaa laga dhagaystay warbixinta wax qabadka u diyaar garowga xuska maalinta qoomiyadaha iyada oo ay siwayn ugu bogeen warbixinta ay soo bandhigeen gudiya heer deegaan ee adan u diyaar garowga xuska maalinta qoomiyadaha ayaa waxay isla maalintii shalay kor meer ku soo mariin dhamaan mashaariicaha loogu diyaar garoobayo xuska sida guryaha loogu tala galay soo dhawaynta marita ee laga dhisay mahadka magmata kuwaasi oo dhamaantood la soo gaba bageeyay Waxaa kale oo ay waftiga iyo gudiyadan qaqan qaabadu soo indha indheeyeen garoonka wayn ee loogu tala galay xuska oo siwayn loo dayactiray oo la dhamays tiray dayactirkiisa sidoo kalena waxay soo mareen guryo soo baali aad u qurux badan oo laga dhexdhisay xarunta madaxtooyada dhexdeeda.
Waftiga iyo gudiyadan ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa loogu sameeyay casho sharaf guriga martida waxaana halkaasi siwayn ugu dadaaliyay kooxaha fanka iyo suugaanta ee DDSI iyada oo ay kooxahasi soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee DDSI iyo dhaantooyin cusub oo loogu tala galay xuska maalinta qoomiyadaha taasi oo ay siwayn ugu bogeen waftiga gudiyada qaban qaabada.
sidoo kale waxaa maanta shiryeeshay gudiga sare ee qadan qaabada maalinta xuska qoomiyadaha iyo shucuubta dalka itoobiya shirkaasi oo ay hogaaminayeen madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar iyo afhayeenka golaha fadareeshinka dalka itoobiya mudane kase tegle burhaan shirkan oo ahaa shirkii 3aad ee ay yeeshaan gudiga sare ee qaban qaabada waxaana la dhagaystay warbixinta gudiga sare ee qaban qaabada.
Warbixintaasi oo ahayd mid siwayn loogu bogay ayaa waxay gudiyadani siwayn ula dheceen heerka uu gaadhsiisan yahay u diyaar garowga balaadhan ee ay xukuumada DDSI ku wajahayso xuska maalinta qoomiyadaha iyaga oo sheegay in ay wakhtigii loogu talagalay in uu dhamaadaan mashaariicaha loogu tala galay xusku in ay dhamaadeen wakhti aad uga horaysa taasina ay tahay ka go-naanshaha xukuumada ee ku wajahan xuska maalinta qoomiyaha